अभियुक्तका बुवाले घटनामा संलग्न भन्दै आरोप लगाएका वडाका कर्मचारी को हुन् ? – News Nepali Dainik
अभियुक्तका बुवाले घटनामा संलग्न भन्दै आरोप लगाएका वडाका कर्मचारी को हुन् ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १०, २०७७ समय: ८:३८:३५
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको ब’ला त्का’र र ह,त्यामा अभियुक्तका बुवाले वि’वा’दास्पद बयान दिएका छन। आइतबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियुक्त दिनेश भट्टका बुवाले छोरालाई जबर ज’स्ती ह,त्या स्वीकार गर्न लगाइएको र आफ्नो छोरा नि’र्दोष भएको बताएका हुन् ।
दिनेशका बुवाले आफ्नो छोरा नि’र्दोष भएको मात्रै दाबी गरेका छैनन घटनामा स्थानीय वडा नम्बर–७ मै कामगर्ने वडाका कर्मचारीको संलग्नता रहेको वि’वा’दास्पद बयान समेत दिएका छन। आइतबार अपरान्ह उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो छोरालाई स्थानीय वडाका कर्मचारीले ध’म्की दिएर ह,त्या स्वीकार गर्न लगाएको विवा’दास्पद बयान दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो छोरा नि’र्दोष छ ।
उसलाई स्थानीय वडाका कर्मचारीले घाँ’टीमा च’क्कु राखेर आफू र बुवालाई समेत मा,रि दिने ध’म्की दिएको र अप’रा ध स्वीकार गर्न भनेकाले डरले उसले अप’रा ध मैले गरेको हो भनेको रहेछ।तर सुधार केन्द्रमा ल्याइसकेपछि उसले ३ जना बडीगार्ड (प्रहरी कर्मचारी)का सामुन्ने घटनामा आफ्नो संल’ग्नता नभएको बताएको छ ।’
अभियुक्तका बुवाले घ’टनामा अर्कै व्यक्तिको संल’ग्नता भएको दाबी गरेपनि न दिनेशलाई ध’म्काएको कुरा पुष्टी गर्न सकेका छन्, न आफ्नो छोरा नि’र्दोष भएको कुनै आधार नै पेश गरेका छन। आफ्नो छोरालाई ध’म्काएको कल रेकर्डसमेत भएको दाबी गरेपनि पत्रकारले सुनौँ न त भन्दा अहिले सुनाउन नमिल्ने बताए । ‘ती व्यक्ति को हुन् त ?’ भनेर पत्रकारले बारम्बार प्रश्न गरे पनि आफ्नो सु’रक्षाको ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै उक्त व्यक्तिबारे बोल्ने बताए । यद्यपि उनले पटक पटक स्थानीय वडाकै कर्मचारी हो भन्न चाहिँ छुटाएनन् ।
यता प्रहरीले भने, त्यसलाई ‘सामान्य आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । रातोपाटिसँगको प्रश्नमा ती अधिकारीले भनेका छन्, ‘परिवारका सदस्यले छोरालाई जोगाउन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। किनभने परिवारमा केही गर्न सक्ने व्यक्ति ऊ मात्रै थियो । तर ऊ पनि अप रा धमा मु’छिएपछि परिवारमा परेको चो’टलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसबाहेक केही व्यक्ति वा समूह ती परिवारलाई उचालेर राजनीतिक र सामाजिक लाभ लिन खोज्ने पनि हुन सक्छन। त्यसकारण त्यसलाई सामान्य ढङ्गले बुझ्नुपर्छ । तर यो विषय अदालतमा पुगिसकेको कारण मैले थप केही बताउन मिल्दैन ।’
अदालतमा विचाराधीन विषय भएपनि प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्यो नि त भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘बाहिर कसले के के कुरा भन्छन् भनेर सबै कुराको सम्बोधन गर्न सकिँदैन। तर के बुझ्नुहोस् भने अभियुक्तको बयान, घटनास्थल मुचुल्का, प’क्रा उपछि अभियुक्त कै बयानका आधारमा भेटिएका घ’डी लगायतका सामानहरूले घटना उसको सं’लग्नताबारे पुष्टी गरिसकेको छ । पछि त प्राविधिक परीक्षणमा पनि निजको संल’ग्नताको पुष्टी भइसकेको छ ।’ यो मु’द्दा अहिले जिल्ला अदालत बैतडीमा विचारा धीन अवस्थामै रहेको छ ।
Last Updated on: March 23rd, 2021 at 8:38 am